Nooca ugu yar xayawaanka Xamaaratada ee adduunka oo la helay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nooca ugu yar xayawaanka Xamaaratada ee adduunka oo la helay
Seynisyahannada ayaa aaminsan inay heleen nooca ugu yar ee xayawaannada la isku yiraahdo “Xamaaaratada” ee dunida oo dhan, kaas oo ah jirjiroole aad u yar oo la eg miraha abuurka beeraha.
Labo kamid ah jirjiroolayaasha ayaa waxaa helay koox baarayaal oo ah ka kooban khubaro u dhalatay Jarmalka iyo Madagascar, oo ku sugan dalka Madagascar.
Jirjiroolahan labka ah oo lagu magacaabay Brookesia nana, ama eray bixinta seyniska lagu yiraahdo “nano-chameleon”, ayaa cabirka jirkiisu yahay 13.5 mm, kaas oo ka dhigaya xayawaanka ugu yar ee xamaratada la yaqaano oo gaaraya ilaa 11,500, sida uu sheegay ururka cilmibaarista xayawaanka oo fadhigiisu yahay Magaalada Munich.
Kan dhedigga ah ayaa cabirkiisu yahay 29mm, sida uu ururku sheegay.
Jirjiroolaha cusub ayaa laga helay keyn ku taalla Waqooyiga dalka Madagascar, waxaana jirta cabsi laga qabo inuu baaba’o” ayaa lagu yiri warbixinno ay soo saareen seynisyahanada.
Cilmi baarayaasha ayaa ogaday in jirjiroolaha uu maalintii ugaarsado cayayaanka injirta halka habeenkiina uu ku dhuunto cawska isagoo iska qarinayo xayawaanka kale ee isaga ugaarsada.
Qoraal uu soo dhigay boggiisa gaarka ah ayuu Dr Mark Scherz, oo kamid ah cilmi baarayaashii ku lug lahaa soo bandigidda arrintaas ugu yeeray “tallaabo cajiib ah”
Wuxuu intaa ku daray in keymaha laga helay Jirjiroolayaasha lagu magacaabay Brookesia weli lala xiriirinayo kuwa kale, oo laga yaabo inay ku nool yihiin guud ahaan Waqooyiga jasiiradda.
“Marka, jirjiroolahan cusub ee aadka u yar ayaa soo afjaray helitaankii isdaba joogga ahaa ee cayayaanada laga helay jasiirado yar yar. Taasi waxay ka dhigantahay in uu jiro wax kale oo u ogolaanaya ama keenaya cirib tirka jirjiroolayaasha,” ayuu intaasi raaciyay.
Seynisyahannada waxay warbixintooda ku soo jeediyeen talo ku aaddan in jirjiroolahan cusub lagu soo daro liiska xayawaannada khatarta ugu jira in ay dabar go’aan ee ururka caalamiga ee ilaalinta khayraadka dabiiciga ee loo soo gaabiyo IUCN si loo ilaaliyo.
Previous articleIndonesia oo mamnuucday in ay ardayda lagu qasbo xijaabka
Next articleMadaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo war ka soo saaray fashilka ku yimid shirkii Dhuusamareeb
Ra iisal wasare Rooble oo la kulmay Labada safiir ee...
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda JFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjireyaasha dalalka Turkiga iyo Qatar Mudane Mohmet Yelmez iyo Mudane Hassan Hamza...
DEG:Baarlamaanka fedaraalka Somalia oo soo saaray sharci jiheynaya doorashada dalka, horseedaya...
Villa Somaliya oo iska fogaysay Eeda uga timid musharixiinta...
Waa Kuma Safiirka cusub ee badalay Donald Yamamoto ee uu shalay...
Dowladda Eritrea oo qirtay in ciidamadeeda ay ka qeybgaleen dagaalka...